Uhlalutyo lwe-AirTag: itekhnoloji igxile kwelona liphezulu | IPhone iindaba
Uhlalutyo lwe-AirTag: itekhnoloji igxile kwelona liphezulu
ULuis Padilla | 03/05/2021 10:00 | Izixhobo ze-IP, Ezahlukeneyo
U-Apple usandula ukukhupha imveliso entsha: I-AirTag, indawo ekunceda ukuba uyazi ukuba ziphi izinto zakho ngalo lonke ixesha, kwaye ukuba amaxabiso kunye nezibonelelo zithembisa ukuba yibhombu. Siyivavanya kwaye sikubonise yonke into ekufuneka uyazi ngayo.
3 Khangela usetyenziso
4 Ayisiyo inkqubo yokulwa nobusela, okanye indawo ekufunyanwa kuyo izilwanyana zasekhaya
5 Ubumfihlo buza kuqala
Ukulinganisa ngaphezulu nje kweesentimitha ezi-3 ububanzi, i-8 yeemilimitha ubukhulu kunye nobunzima be-11 yeigram, le nto incinci incinci inkulu kuneyona ngqekembe, eyenza kube lula ukulungela naphi na. Kwaye xa usitsho naphina, uyathetha, kuba Ngombulelo kwinkcazo ye-IP67, iyaxhathisa eluthulini nasemanzini, nkqu nokumelana nokuntywiliselwa kubunzulu bemitha enye ubuninzi bemizuzu engama-30.. Ifumaneka kuphela emhlophe, iklasikhi e-Apple, ewe singayenza ngokwezifiso ngokucela ukuyirekhoda ngaphandle kwendleko. Kule mibhalo sinokusebenzisa ukuya kuthi ga kubalinganiswa abane, okanye nakwii-emojis.
Inonxibelelwano I-Bluetooth LE yokuqhagamshela kwi-iPhone yakho, i-U1 chip yokukhangela ngokuchanekileyo, kunye ne-NFC ukuze nayiphi na i-smartphone, nkqu i-Android, ikwazi ukufunda ulwazi oluqulatheyo kwimeko yelahleko. Inika isithethi esakhelwe-ngaphakathi, iselfowuni enamaqhosha e-CR2032 enokutshintshwa ngokulula ngumsebenzisi, kunye nesixhobo esikhawulezayo. Kunzima ukugxila kubuchwephesha kwizixhobo ezincinci, kodwa iApple ikwazile ukoyisa isithintelo esibi kakhulu kwezi ntlobo zezincedisi: nokuba ukude kangakanani kuyo, uya kuba nakho ukwazi ukuba iphi. Kamva ndiza kukucacisela.
Iseli yeqhosha ibingumbono ophikisayo, uninzi lucebise ukuba ibhetri egcwalisekayo ibiza kuba ngcono. Ngokwam nasemva kokubona okwenzekayo ngeebhetri kwezi zixhobo zincinci (ezinjengeeAirPods), ndicinga ukuba kungcono ibhetri onokuyilahla kwisitya esifanelekileyo kwaye uzitshintshe, isixhobo esitsha kraca. Ubomi beli bhetri bonyaka omnye ngokwe-Apple, kodwa iya kwahluka ngokuxhomekeka kwindlela oyisebenzisa ngayo. Ukuba ulahlekelwa yi-AirTag yakho rhoqo kwaye usebenzisa indawo ngqo okanye isithethi, ixesha liya kuba lifutshane.
Ii-AirTags zisebenzisa uqhagamshelo lwamandla aphantsi eBluetooth (LE) ukunxibelelana ne-iPhone yakho ngelixa usitya ibhetri encinci, into ebalulekileyo xa sithetha ngesixhobo esincinci kakhulu kwaye ukuzimela kufuneka kube kude kangangoko kunokwenzeka. Uluhlu lolu nxibelelwano lweBluetooth lufikelela kwiimitha ezili-100, kodwa oku kuxhomekeke kakhulu kwinto ephakathi kwe-AirTag kunye ne-iPhone yakho. Ikwasebenzisa i-chip ye-U1 (ye-Ultra Wide Band) ukwazi ngokuthe ngqo indawo ekuyo i-AirTag, ngokuchaneka kangangokuba ibonakalise ngotolo apho ikhoyo, nangona oko kusenzeka kuphela xa kukho umgama omfutshane phakathi kwe-iPhone yakho kunye ne-AirTag yakho, kwaye kuphela ukuba une-iPhone ene-U1 chip (i-iPhone 11 kwaye kamva).
Unxibelelwano ne-iPhone lwenziwa ngokuzenzekelayo nje ukuba ususe iplastikhi egubungela i-AirTag, ebangela ukuba isandi sokuqala sale tracker sikhutshwe. Njengokucwangcisa ii-AirPods zakho, okanye i-HomePod, iwindow esezantsi yeklasi iyavela kwaye emva kwamanyathelo ambalwa i-AirTag yakho enokuthi idityaniswe kwiakhawunti yakho yeApple, ekulungeleyo ukuyisebenzisa. Eli khonkco neakhawunti yakho alinakuphinda libekho, akukho thuba lokuseta kwakhona iAirTag yakho ukuze ucime idatha yakho. Ngumnini kuphela onokuyenza kwisicelo sokuKhangela kwi-iPhone yabo okanye kwi-iPad. Inkqubo yokhuseleko eyimfuneko yokwenza ukuba ibe sisikhangeli esisebenzayo.
Kutshanje iApple ibhengeze ukudityaniswa kwabagibeli bomntu wesithathu kwisicelo sayo sokuKhangela, ivulela indlela ii-AirTag zayo, esinokuthi ngokusobala sizilawule ngaphakathi kwesi sicelo. Siyayibona indawo ekuyo emephini, siyenze ikhuphe isandi ukuyifumana ukuba sikufuphi, kwaye sinokukhangela ngokuchanekileyo ukuba sine-iPhone ene-U1 chip. Kwimeko apho siphulukene nento esincamathisele kuyo i-AirTag, siya kuyiphawula njengelahlekileyo. Xa usenza oku siyakucelwa inombolo yefowuni kunye nomyalezo oya kuboniswa kuye nabani na oyifumeneyo, ukukunceda ukuba uphinde uyifumane.
Enye yezona zinto zinomdla kakhulu kwi-AirTag kukuba nokuba ukude kuyo, ukude kakhulu, uya kuba nakho ukwazi indawo ekuyo kwimephu. Ingenzeka njani le nto? Ngenxa yokuba i-AirTag iza kusebenzisa nayiphi na i-iPhone, i-iPad okanye iMac ukuthumela indawo yayo ukuze wazi ukuba ikuphi. Oko kukuthi, ukuba ushiya izitshixo kwindawo yokutyela, kwaye uye emsebenzini, xa uqaphela ukuba uzilibele phaya, nokuba ukude ngeekhilomitha, ungazikhangela emephini ukuba nje kukho umntu okufuphi nge-iPhone, i-iPad okanye iMac.
Ukuba umntu ufumana isixhobo sakho esilahlekileyo, uya kufumana isaziso sokuba kufunyenwe kunye nendawo ekuyo ngqo, kwaye loo mntu uya kuba nakho ukubona loo myalezo uwushiye ubhalelwe ukunxibelelana nawe. Nokuba usebenzisa i-Android ungasebenzisa i-NFC ye-AirTag ukufumana olo lwazi. Ngendlela, into ebalulekileyo kukuba ii-AirTags azabelwanga phakathi kwamalungu osapho, kwisicelo sakho sokuKhangela ubona kuphela ii-AirTags zakho, hayi ezo zosapho lwakho lonke, kwaye ekuphela komntu ofumana izaziso ngumnini weAirTag , akekho omnye umntu.
Ayisiyo inkqubo yokulwa nobusela, okanye indawo ekufunyanwa kuyo izilwanyana zasekhaya
Oko iApple yabhengeza ii-AirTags zayo, konke ukusetyenziswa okunokwenzeka abantu bacinga ukuba kunganika le nto incinci yeApple ukuqala ukubonakala kumnatha. Inye kuphela inyani: sisixhobo se-locator, yiyo loo nto. Ayisiyo inkqubo yokulwa nobusela, ayisiyoyokulandela izilwanyana zasekhaya, ingakumbi abantu. Ewe wonke umntu angayisebenzisa ngendlela athanda ngayo, njengayo nantoni na, kodwa ukuba usebenzisa ipani ukwenza ipitsa, into eqhelekileyo kukuba isiphumo asisiyona ilungileyo, nangona inokwenziwa. Kuyafana nakwii-AirTags: ukuba ucwangcisa ukuzisebenzisa njengenkqubo yokulwa ubusela okanye umkhondo wesilwanyana sasekhaya, uya kufumana iimpazamo ezimbalwa, kuba ayiyonjongo yazo leyo.
Kwaye oko I-AirTag ifuna ukuba nabani na oyifumeneyo azi ukuba ikhonaKungenxa yoko le nto ikhupha izandi, ithumela izaziso kwi-iPhone, njl. Ukuba isela liba ubhaka wakho kwaye lifumana isaziso okanye livile isandi kwi-AirTag, baya kuyilahla ngoko nangoko okanye basuse ibhetri. Kungenxa yokuba yenzelwe ukuba nabani na ofumana ubhaka wakho azi ukuba angaqhakamshelana nabani na ukuze abuyise, hayi ukuveza isela elinokuba libiwe. Ayisiyiyo tracker elungileyo yezilwanyana zasekhaya, abantu abangaphantsi kakhulu.
I-Apple kudala ijolise kubucala babasebenzisi bayo, kwaye ii-AirTags azikho ngaphandle. Ayigcini nje ngokugcina yonke idatha oyithumela ngasese, nokuba usebenzisa i-iPhone yomntu ongamaziyo ukuthumela indawo yabo kwiakhawunti yakho ye-iCloud, kodwa iApple iphumeze amanyathelo okhuseleko okuthintela umntu ekukulandeleni nge-AirTag oyibeke kwenye indawo ngaphandle kokuqonda. yiyo. Ke xa iAirTag engeyoyakho ihamba nawe okwethutyana, iselfowuni yakho iya kwaziswa ngesaziso. Ukuba ufika endlwini yakho okanye kwenye indawo uhlala uhamba ne-AirTag engeyoyakho, uya kwaziswa ngokunjalo. Ezi zaziso zokhuseleko zinokukhubazeka, kodwa kufuneka zikhutshazwe ngumntu ofumana eso saziso sokhuseleko, hayi umnini we-AirTag.
Ii-AirTags ezintsha zika-Apple ziphinde zaseta indlela kulo lonke ukhuphiswano. Kudala sisebenzisa izixhobo ze-locator ixesha elide, kodwa akukho nanye kuzo zonke izinto esizibonakalisileyo kwii-AirTags. Uyilo, ukuzimela, ukuxhathisa, ukudityaniswa kwenkqubo kunye nexabiso, awuyi kufumana indawo elungileyo ukuba usebenzisa i-iPhone. Ewe isenazo ezinye iincukuthu ekufuneka ipolishiwe, njengaleyo engakulumkisi xa usuka kuyo, kodwa iApple ibipolisha ukusebenza kwezi AirTag ixesha elide kwaye iyabonisa. Kwaye unezigidi zezixhobo kwihlabathi liphela zokukunceda ufumane i-AirTag yinto ekungekho mntu unokuyenza ngaphandle kwe-Apple. Ngee- € 35 ezi pager ziya kubakho naphi na kwiinyanga ezimbalwa, siza kubabona ngaphezulu kwee-AirPods.
Ithunyelwe nge: Meyi 3 ye2021
Utshintsho lokugqibela: Meyi 3 ye2021
Uyilo oluhambelanayo nolumkileyo
Itekhnoloji ephezulu kunye ne-U1 chip
Ukusetyenziswa kwazo zonke izixhobo zeApple zendawo
Akukho thuba lokwazisa xa ushiya kude naye
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izixhobo ze-IP » Uhlalutyo lwe-AirTag: itekhnoloji igxile kwelona liphezulu
I-Apple inokuhambisa iiyunithi ezingama-20 ezigidi ze-iPhone yokuqala enokusongwa ngo-2023
I-iMac entsha, i-iPad Pro, kunye nokuqaliswa kwe-Apple TV ngoMeyi 21